Seeraar Card Debit FAQ - Seeraar Credit Card Isbarbar 2018
Waa maxay kaarkaaga debit Seeraar a?
kaarka debit Seeraar A waa VISA ama Mastercard in aad isticmaali karto si badeecadaha iyo adeegyada iibsadaan dukaamada online iyo offline ama lacag ka ATM baxaan. Isla mar ahaantaana waxa ay si toos ah waxa taageeray lacag Seeraar. kaararka debit Seeraar dhigi helitaanka fudud in ay ku qaataan lacag cryptocurrency meel kasta oo dunida ah.
Waa maxay noocyada kaararka debit Seeraar jirta?
The kaarka debit Seeraar caag eg VISA caadi ah ama Mastercard oo aad isticmaali karto si la mid ah. The kaarka debit Seeraar dalwaddii la soo saaro online faahfaahinta la mid ah sida kaarka debit caadiga ah. magaca qofka kaarka, taariikhda dhicitaanka iyo codes CVC / CVV waxaa la siiyaa dul si, laakiin ma jiraan wax soo saarka phsyical taas oo kuu sahlaysa iyo si dhakhso ah si ay u helaan lacagaha.
Sidee ayaan isticmaali karaa kaarka debit Seeraar a?
Waxaad isticmaali kartaa kaadhka debit Seeraar a sida wax kaarka debit prefunded. Waxaad qarashgareyn kartaa dheelitirka ee card ee gadashada alaabta iyo adeegyada dukaamada maxaliga ah ama dukaamada online. Haddii aad qabto kaarka caag ah Seeraar debit, aad ka ATM bixi kartaa lacag caddaan ah. Waxaad kaloo isticmaali kartaa kaarkaaga debit Seeraar inuu iibsado labada gudaha iyo dibadda.
Maxay yihiin lacagaha aan isticmaali kartaa kaadhka debit Seeraar leh?
Seeraar kaararka debit haya lacag la heli karo in lacagaha Fiat ag Seeraar. The lacagaha ugu caansan waa USD, EUR iyo iibiyey. Lacagta lagu hagaajin karo sida lacagta default lala lacagta kaarka debit Seeraar ah, sidaas xawaalad sameeyey kaarka waxaa lagu muujiyay in lacagta in. Lamaanihii bixiyeyaasha furo suuqyada kaarka debit Seeraar in lacagaha dheeraad ah iyo sidoo kale. Ka mid ah kuwa kale, bixiyeyaasha ayaa sidoo kale waxay bixisaa kaararka debit Seeraar leh lacagta default in xoqin, CNY, JPY, KRW, AUD iyo CHF. bixiyeyaasha qaarkood ayaa sidoo kale waxa uu fursad u maal-kaarka la altcoins sidoo ag Seeraar.
Sidee baan ku dalban kartaa kaadhka debit Seeraar a?
Si aad u leeyihiin kaarka debit Seeraar a, waa in aad iska diiwaan gelin mid ka mid ah madal bixiyayaasha '. nidaamka diiwaan gelinta waxaa ka mid ah bixinta faahfaahintaada shakhsi ahaaneed ee qofka kaarka, sida magaca, taariikhda dhalashada iyo goobta degenaanshaha. Macluumaadka la siiyey waa in markaas laga xaqiijiyo aqoonsiga oo sawir leh iyo caddayn ah joogitaanka. Tani waxay noqon kartaa qodob ka kooban cinwaanka caldholder ah. Ka dib u geliya amarka iyo doorashada hab maraakiibta kaararka caaga ah waxaa loo dhiibay in aad guriga. Xaaladdan oo aad doorato kaarka dalwaddii, faahfaahinta kaarka waa la soo saaray cinwaanka emailkaaga. Haddii aadan rabin in ay wadaagaan macluumaadka shakhsiyeed, waxaad ka dalban kartaa kaarka qarsoodi ah Seeraar debit aan xaqiijinta.
Ma heli karaa kaarka debit Seeraar oo aan xaqiijinta?
Haa. kaararka debit Anonymous Seeraar waxaa laga heli karaa laba ka mid ah bixiyeyaasha ee suuqa. Haddii aadan rabin in ay dhex maraan hannaanka lagu hubinayo bixinta ID sawir iyo cadeyn degenaanshaha, waxaad dooran kartaa kaarka debit Seeraar qarsoodi ah. Xaaladdan oo kale si kastaba ha ahaatee waxaa xusid mudan in xadka lagu dabaqi karo users la xaqiijin waxaa mar kasta ka hooseeya marka loo eego dadka isticmaala xaqiijin. qadar kooban daraaddeed kaliya ee lacag loo isticmaali karaa kaararka debit Seeraar qarsoodi beddelkeeda bixinta kaliya magac in la soo bandhigi on kaarka.
Mudo intee leeg ayay qaadanaysaa si ay u helaan kaarka debit Seeraar a?
The kaararka debit Seeraar caag ah ayaa la soo saaray by VISA ama Mastercard iyo waxa ay qaadataa oo ku saabsan 2-3 toddobaad si ay u helaan. Tirada waqtiga si aad u hesho kaarka waxaa ku xiran tahay masaafada u dhexeysa bixiyaha card iyo kaarka. Waayo lacag dheeraad ah bixinta express waxaa lagu qaadan karaa dhamaan bixiyeyaasha. Xaaladdan oo kale kaararka yihiin gudahood 2-5 maalmood oo shaqo la adeegyada ay bixiyaan oogeen oo ay la socdaan tirada raadraaca a.
Sidee baan hogaanka kartaa kaadhka debit Seeraar a?
Waxaad hogaanka karaa kaarka debit Seeraar dhowr siyaabo kale oo aan ahayn Seeraar. Waxaad isticmaali kartaa bangiga kala iibsiga silig, credit ama debit cards iyo bixiyeyaasha lacag kale sida Neteller iyo Skrill. Xaaladaha intooda badan si kastaba ha ahaatee PayPal ma aha mid ah habka lacag bixinta aqbalay sabab u ah shuruudaha iyo xaaladaha ay.
Sidee baan lacag ka kaarka debit Seeraar a ka bixi karo?
Waxaad lacag ka kaarka debit Seeraar a siyaabo la mid noqon kartid sida aad ku raran yihiin xisaabta. Waxaad bitcoins cinwaan kale u diri kartaa. Waxa kale oo aad ka bixi karto lacag ay ku xisaab bangi ama in Hay'adda lacagta kale, sida Skrill ama Neteller. Xaaladaha intooda badan si kastaba ha ahaatee PayPal ma ka mid ah habka aqbalay ka bixitaanka kaararka debit Seeraar waa.
Waxaan lacag ka ATM noqon karaa kaarka debit Seeraar?
Haa. Waxaad lacag ka ATM ka bixi karo dunida oo isticmaalaya kaarka debit Seeraar caag ah.
Intee in leeg kharashka kaarka debit Seeraar a?
Qiimaha ka mid ah kaararka debit Seeraar waxaa kala duwan ee guud ahaan bixiyeyaasha. The kharashka soo saarista hal mar ah kaar caag Seeraar debit waa inta u dhaxaysa 5-25 USD. Qiimaha soo saarista kaarka debit Seeraar ah dalwaddii waa wax badan ka yar, aad xataa ka heli kartaa lacag la'aan meelaha qaar ka mid ah. Oo ayan ku jirin qiimaha wax soo saarka hal mar ah kaarka, lacag dayactirka account bil kasta ayaa lagu eedeeyay in cadadka 1 USD bishii.
Waa maxay kharashka macaamil ganacsi ee la xidhiidha kaadhka debit Seeraar a?
Kharashka macaamil ganacsi oo ka mid ah kaararka debit Seeraar si ballaaran kala duwan, kaararka qaalisan yeelan karaan fii yar. Loading kaarka inta badan waa lacag la'aan, halka bixid waxaa lagu soo oogay lagu salaynayo nooca aad doorato. The POS iyo online iibsaday lagu qaadi karaa lacag go'an ama boqolkiiba prorata. soo bixid ATM waxaa lagu dalacayaa u dhexeeya 1.5-2.5% halkii marba, soo bixid caalamiga ah kharash badan. Waxaa sidoo kale lacag turjumaad lacagta lagu eedeeyay haddii lacagta caadiga ah ma u dhigma lacagta macaamil.
Waa maxay xadka kaarka debit Seeraar a?
Mararka qaar waxaa jira cadadka ugu badan ee fund aad ku shuban kartaa in aad kaarka debit Seeraar. Tani waxay saamayn xaddiga lacagta aad ka isticmaali karto kaarka iyo sidoo kale xaddiga lacageed ee aad ka noqon karaan ATM. users xaqiijin ayaa laga yaabaa in xadka sare iyo sidoo kale bixiyeyaasha qaarkood waxay bixiyaan kaarka debit Seeraar aan xad lahayn u isticmaala diiwaangashan. topup noolaa ayaa waxaa ay ku koobnaanayaan agagaarka 2000 USD dadka isticmaala si qarsoodi ah.
Maxay yihiin ajuurada bixitaanka ATM la xidhiidha kaadhka debit Seeraar a?
Seeraar bixiyayaasha kaarka debit eedeeyo ajuurada markii saaro lacag caddaan ah ka ATM. lacagtaas lagu soo oogi karo halkii marba ama prorata. The soo bixid ATM gudaha oo caadiyan qiyaastii ku kici 1.5%, halka bixid ATM caalamiga ah waxaa lagu dalacayaa 2.5%.
Waa maxay lacag turjumaad lacagta la xiriira macaamil ganacsi kaarka debit Seeraar?
lacag turjumaad Lacagta ayaa lagu eedeeyay in kiiska lacagta default of account la xiriira kaarka debit Seeraar ah waxaa ka duwan marka loo eego lacagta la sameeyay macaamil ganacsi. Xaaladdan oo go'an 3% lacag turjumaad lacagta lagu soo eedeeyay oo dhan ee bixiyeyaasha ee suuqa.